Factory Tour - toy ny Valve (Tianjin) Co., Ltd
Valve (Tianjin) Co., Ltd locates any Tianjin - mavitrika indrindra ny toe-karena any amin'ny faritra avaratr'i China.Like miditra tsimoramora dia avo-end orinasa mpamokatra entana entana miditra tsimoramora orinasa izay manana endrika fikarohana sy ny fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, tolotra barotra ao anatin'ny iray.
Amin'ny nandroso injeniera famolavolana fomba, tsara mandroso fitaovana orinasa mpamokatra entana, dia naka fanahy fanamarinana fitaovana sy ny hevitry ny mahia famokarana, dia "toa an'i Valve" azo antoka fa ny tsirairay anjara amin'ny vokatra rehetra ao isika manome kalitao avo sy performance.The kalitao fanomezan-toky avy amin'ny fitantanana ny tsipiriany rehetra. Hatramin'ny fanorenany, ny orinasa dia nandray solosaina-nanampy famolavolana, toy ny CAD sy Solidworks, ary ny voalohany mba hampidirana nandroso Enina Sigma fitantanana.
Nanorina napetraka ny rafitra fitantanana hentitra tsara, mbola hanenjika aotra kilema vokatra. Misahana ny lolo isika miditra tsimoramora, vavahady miditra tsimoramora, miditra tsimoramora izao tontolo izao, jereo miditra tsimoramora, baolina miditra tsimoramora, hydraulic fanaraha-maso miditra tsimoramora, fahaiza-mandanjalanja sy ny andian-dahatsoratra miditra tsimoramora vokatra. Izany ihany koa ny mahatonga trano valves amin'ny fitaovana isan-karazany, ny fanerena, ny habeny sy ny vokatra hafa, dia misy maherin'ny 50 andian-dahatsoratra, mihoatra ny 1200 karazany.
TOA Valve dia ny kilasy voalohany-siansa sy ny teknolojia zava-baovao, kilasy voalohany fanompoana, toop tsara fanahy fandraisana handray anjara amin'ny ho avy ny famoronana. Noho ny kalitaon'ny vokatra sy ny mpanjifa fahafaham-po hamolavola ny raharaham-barotra ny orinasa, amin'ny Nifanesy koa ny fanenjehana sy ny fampandrosoana maharitra mihoatra noho ny tenantsika. "Toa nofy" hanao "nofy Shinoa" mahafinaritra kokoa!